Natsipy tao an-tokotanin’olona ilay razana: vehivavy hita faty, voatsatoka antsy teo amin’ny tendany | NewsMada
Vehivavy mpivaro-tena iray, maty nisy namono tamin’ny fomba feno habibiana tao an-tampon-tananan’Andapa, omaly. Natsipin’ireo olon-dratsy tao anaty tokotanin’olona ny fatiny, avy eo.
Hitan’ireo mpandalo tao anaty bozaka, anatina tambohon’olon-tsotra teo akaikin’i Sonatra, tampon-tanàn’i Andapa, omaly maraina tokony ho tamin’ny 06 ora ny vata-mangatsiakana vehivavy iray sahabo ho 30 taona. Novonoina tamin’ny fomba feno habibiana io vehivavy mpivaro-tena io, hoy ny fanazavan’ny polisy misahana ny famotorana. Manaporofo izany ny tsatok’antsy teo amin’ny tendany sy ny fanakendana natao azy. « Habibiana tsotr’izao no namonoana an’ilay vehivavy io. Rehefa nojeren’ny mpitsabo ny tenany dia tsy nisy trangana fanolanana », hoy hatrany ireo polisy ao an-toerana.
Mangana ny lamosiny
Tsikaritra koa fa nisy mangana ny lamosin’ilay vehivavy monina ao Ankevaheva Andapa io, tamin’ny fizahana natao, hoy kosa ny zandary. Taorian’izay noentina teny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly ny vata-mangatsiakany ary efa eo am-pelatanan’ny fianakaviany, ankehitriny.
Fantatra fa nijoro niaraka tamin’ireo namany telo vavy tao Bazar Be ilay vehivavy io talohan’ny tranga. Nanapa-kevitra namonjy trano fisotroana toaka tao Beanana avaradrano izy ireo manodidina ny tamin’ny 10ora alin’ny alatsinainy. Nony tonga tao an-toerana, namonjy azy ireo ny lehilahy telo, efa tao amin’ilay bara ka nanasa ireo vehivavy hiaraka hisotrosotro.
Nitady toaka tany ivelany…
Tsy nety tamin-dRatompokovavy anefa ilay zava-pisotro naroson’ireo namany ka nilaza izy fa hitady toaka mafana any ivelany. Tsy niverina intsony anefa ilay mpivaro-tena taorian’izay, ireo namany kosa nihevitra azy namonjy fodiana ka tsy nanaraka azy koa.
Hagagana ny an’ireo namany, omaly, raha nahita ny vata-mangatsiakan’ilay vehivavy avy any Sambava, nitsirara tao anatina tambohon’olona tsy nisy vavahady tao akaikin’ny Sonatra.
Hatreto tsy mbola misy ny olona ahina nahavanon-doza, araka ny nambaran’ny mpitandro filaminana.